Yenguva Yakareba Strategic Kushambadzira inotora Kushinga | Martech Zone
Chipiri, July 7, 2009 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Pandakashanda nevatengi munguva yakapfuura pakushambadzira kwakananga tsamba, kiyi yekubudirira yaive akawanda akakodzera mameseji akaunzwa kakawanda. Ini ndaizoyambira vashambadziri nezve kutumira imwe-nguva tsamba uye kutarisira mibairo mikuru. Kakawanda tinopa vatengi vedu humbowo hwekuti kuwanda uye kukosha kwavo kwaive kiyi dzebudiriro.
Zvisinei nekuti unokodzera sei vateereri vako, chokwadi ndechekuti meseji imwechete yakaita sekuisa meseji muhombodo uye kumirira mhinduro. Izvi hazvireve kuti mishandirapamwe iyi haina zvayakakanganisa kana kudzoka mukudyara… vanowanzoita. [Mufananidzo wakanaka wakawanikwa pa Nyoka Blog]
Mushandirapamwe wenguva refu wekushambadzira unoshanda zvakanyanya sekuwedzera kufarira, zvakadaro. In achidzokorora meseji, hausi kundandama… urikupa mikana yakawanda yekuti meseji ibate. Pamwe kekutanga, mushanyi anga asina nguva yekuferefeta zvimwe… kana pamwe muverengi anga asina mukana wekutenga kana kuita panguva iyoyo.
Strategic kushambadzira uye brand kushambadzira nyanzvi vanoda kwenguva refu kushambadzira mishandirapamwe nekuti inovabvumidza yakawanda nguva yeku donha or tsamwa yekuwedzera tidbits yeruzivo munguva yese yemushandirapamwe. Panzvimbo pekumanikidza nesimba kwenguva pfupi, yakasimba-kumanikidza kurwisa, mushambadzi ane hungwaru anomirira mutengi kuti auye kwavari. Mutengi anoda kuuya kwavari mushure mekudzidziswa, kuvaka hukama, uye nekuziva zvizere mukana.
Nhasi, ndakave nemufaro wekutaura naJascha Kaykas-Wolff, Kushambadzira VP yeWebtrends uye takakurukura kuti mafaro enguva refu aya anonakidza sei. Ruregerero futi kumwe kufananidza kwekuredza, asi ini ndinogona kuzvifananidza nekukanda tambo mumvura kana kunyudza mvura nekutsika. Unogona kubata hove pese paunokanda mumutsetse, asi iwe unozotungamira kwakawanda hove… nehove hombe… kana iwe chum uye uchitsika mvura.
Webtrends iri kushanda pane yakasarudzika nzira yekutengesa izvozvi… uye iri kugadzira iyo nhau. Ndiri kutarisira kuona zano richitamba nekufamba kwenguva uye kuona maindasitiri anoita. Icho chokwadi chekuti chiri kutotanga kuziviswa (kunyangwe zvimwe zvisina kunaka) chinonakidza.
Mapfupi-kwenguva marongero anowanzove nenjodzi shoma asi anounza mhedzisiro uye diki mhedzisiro. Yenguva refu-nzira marongero dzimwe nguva ane njodzi huru asi goho rinowanzo kuve rakakura kana richishanda. Kushambadzira kushinga kunopihwa mubairo, zvakadaro. Ini ndinoremekedza makambani ane chirongwa chenguva refu zvakanyanya. Ndicho chikonzero ini ndichinyanya kushanda mu organic yekutsvaga uye magariro enhau maindasitiri… ndinotenda ivo ndivo epitome yeiyo yenguva refu zano. Yenguva refu-nzira marongero makuru anotarisira uye; semhedzisiro, vanofara vatengi.
Tags: Jascha Kaykas-Wolffkushambadzira zvine hungwarunzirazvideo
Jul 8, 2009 pa 5: 50 AM